Beijing Masango University isina waya kufukidza muChina
Customer Profile Beijing Forestry University (BFU, kana BJFU) yunivhesiti muHaidian District, Beijing inotarisana nesango. Iyo yunivhesiti ine hushamwari kugovana ruzivo rwesainzi, mainjiniya, mitemo, hunyanzvi nemitauro kune nyika. Chinodiwa - Yakakwira mashandiro eWiFi chivharo ...
FIFA U20 World Cup 2019 muPoland
Customer Profile 22 FIFA FIFA U-20 World Cup ichaitirwa mumaguta matanhatu muPoland kubva Chivabvu 23 kusvika Chikumi 15 muna 2019. Internet Network Sc ...
DCN inobatsira Rostelecom kuvaka yekumaruwa WiFi kufukidza muRussia
Customer Profile Rostelecom ndiyo hombe yeRussia yenyika telecom opareta ine hombe yepamba musana network (anenge 500,000 km) muRussia uye inopa "yekupedzisira mamaira" kuwana mamirioni makumi matatu nemashanu emisha nyika. Chinodiwa -Paana network kuwana kwevashoma vashandisi mumaruwa ...
DCN ISP Kuwana Network Solution
Background Overview Pasi pemakwikwi anotyisa emusika, echinyakare Internet Service Provider (ISPs) musika webasa rave kuderera uye kuonda (semuenzaniso, Broadband, MPLS VPN neSMS). Zvichakadaro, Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), hombe data analytics, uye gore komputa: ...
DCN IP yekutarisa Network Solution
Ruzivo rweMashure IP mhinduro dzekucherechedza dzinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri ese, se: Dzidzo: kutarisa kure kure kwenzvimbo dzekutambira dzechikoro, mukoridho, dzimba uye dzimba dzekudzidzira, pamwe nezvimwe zvivakwa; · Zvekufambisa: yekutarisa kure kwenzvimbo yechitima, njanji njanji, mugwagwa mukuru nendege ...
DCN Data Center Solution
Ruzivo rwekumashure Kushandiswa kwakapararira kwegore komputa, dhata hombe uye nharembozha internet kuri kumhanyisa kuvhurwa kwemasevhisi matsva uye kugadzira mamwe data epakati traffic. Izvi zvinoda mhinduro yekukurumidza kubva kune data centre network. DCN data Center network mhinduro inopa vatengi kuvaka ...